बलात्कार : समाधान मृत्यूदन्ड की वेश्यावृत्तिलाई कानूनी मान्यता - Tamang Online
बलात्कार : समाधान मृत्यूदन्ड की वेश्यावृत्तिलाई कानूनी मान्यता
दिनप्रतिदिन बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । बलात्कारका घटना बढेसँगै सँगै अभिभावकलाई आफ्नो छोरीहरुलाई कसरी जोगाउने र युवती तथा महिलाहरुलाई कसरी जोगीने भन्ने चिन्ता बढेको बढिरहेको छ । पछिल्लो ५ बर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने पाँचबर्षमा ५ हजार ३ सय १९ बलात्कार भएको डरलाग्दो तथ्यांक छ । अझ उजुरीमा नआएका घटनाहरुको अवस्था कति होला ? र हाम्रो देशमा बलात्कारको भयाभह अवस्थाले समाज कतातिर जाँदैछ सोच्नै कहालिलाग्दै न र ? मुलुकमा भएका बलात्कारका घटनाहरुलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला पाँचबर्षको तथ्यांकलाई एक पटक हेरौं ।
यस्ता छन् बलात्कारका तथ्यांक
आर्थिक बर्ष २०६९।७० मा ६ सय ७७ वटा बलात्कारको घटना, २ सय ४५ वटा बलात्कार प्रयास
आर्थिक बर्ष २०७०।७१ मा ९ सय १२ वटा बलात्कारको घटना ,४ सय १४ वटा बलात्कार प्रयास
आर्थिक बर्ष २०७१।७२ मा ९ सय ८१ बलात्कार ५ सय ६२ बलात्कार प्रयास
२०७२।७३ मा १ हजार ८९ बलात्कार घटना ४ सय ५१ बलात्कार प्रयास
२०७३।७४ मा १ हजार १ सय ३१ बलात्कार ५ सय ३६ बलात्कार प्रयास
२०७४।७५ को फागुन मसान्तसम्म ५ सय २९ वटा बलात्कारका घटना
पछिल्लो ३ बर्षको तथ्याङ्क
आर्थिक बर्ष २०७०।७१ को ९ सय १२ घटना मध्ये ५ सय ६४ जना बालिका र ३ सय ७० जना महिला बलात्कारको सिकार भएका थिए त्यसैगरी २०७१।७२ मा ६ सय ६६ बालिका र ३ सय १५ महिला बलात्कारमा परेका थिए । त्यसैगरी २०७२।७३ मा २ सय १३ जना १० बर्ष भन्दा मुनिका बालिकाहरु बलात्कारको सिकार भएको तथ्यांक छ । यही बर्ष ४ सय ६८ जना १६ देखि १८ बर्ष उमेरसमूहका किशोरीहरु बलात्कारको सिकार भएको देखिन्छ भने ४ सय ८ जना १९ देखि माथि उमेर समुहका महिलाहरु बलात्कारको सिकार भएका छन् । तथ्यांकले के देखाउँछ भने प्रत्येक बर्ष बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।
कञ्चनपुरमा एउटी बालिकाको बलात्कारपछि भएको हत्याको सात हप्ता हुन लाग्दा पनि अझै दोषीको पहिचान हुन सकेको छैन । तर सो घटनापछि बलात्कारका घटना अझ वृद्धि भएको नेपाल प्रहरीले समेत स्वीकारेको छ ।
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको घटनामा मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ गरिएका एक जनालाई सोमवार डीएनए नमिलेको भन्दै छोडिएको छ ।
सो घटनाको छानबिन गर्न गठित सरकारी समितिका संयोजक हरिप्रसाद मैनालीले अनुसन्धानमा प्रहरीको कमजोरी देखिएको बताएका छन् ।
तर उक्त घटनाको टुङ्गो लाग्न नपाउँदै त्यसयता देशका विभिन्न स्थानमा बलात्कारका घटनाहरू भएका विवरणहरू प्राप्त भएका छन् ।
कतिपयले यस्ता घटना दोहोरिरहनुलाई सामाजिक सोच र संवेदनशील विषयमा समेत अनुसन्धानका क्रममा देखिएको कमजोरीलाई जिम्मेवार ठानिरहेका छन् ।
त्यसोत बलात्कारका घटना अपरिचितबाट भन्दा चिनेजानेकै वा आफन्तबाट बढी हुने गरेको पाइएकाले अनुसन्धान गर्न कठिन हुने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जो बलात्कार पीडित छ उसैलाई दोषारोपण गरेर बहस सुरू हुन्छ । उसको चरित्र, व्यक्तित्व र उठबस कोसँग थियो भन्नेजस्ता कुराहरू उठ्न थाल्छन् । पछिल्ला केही वर्षका घटनाक्रमले पीडितहरू ११ देखि १७ वर्ष बीचका बालिकाहरू धेरै रहेको पाइएको छ । गत वर्ष मात्र देशभरिबाट प्रहरीमा १,४८० बलात्कारका उजुरी दर्ता भएका थिए जसमध्ये १,१६६ अभियुक्तलाई अदालतमा उभ्याइएको प्रहरीको भनाइ छ । तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक बर्ष बलात्कारका घटनाहरु बढिरहेका छन् ।
तर पनि घटनाहरू कम हुनुको साटो बढ्नुको कारण पत्ता लाग्न सकेको छैन । कतिपयले भने यसअघिका न्यायसम्पादन र कानुनी कारवाहीमा पीडितलाई निरुत्साहीत गर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले कडा कानुन हुँदा हुँदै बलात्कारका घटनामा कमी नआएको बताउँछन् ।
बलात्कारका घटनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर हेरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा पीडितहरूले प्रहरी कार्यालय तथा अदालतमा बारम्बार झेल्ने तनाव र दुव्र्यवहारले उल्टै पीडकलाई प्रोत्साहन गरिरहेको अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ ।
कैयौँ अवस्थामा बलात्कारसम्बन्धी अपराधलाई समेत सामाजिक मेलमिलापको विषय बनाइँदा यो अक्षम्य अपराध भएको कुरा समाजले लिन नसकेको बताइन्छ ।
पीडितको सुरक्षा, प्रमाणको संरक्षणदेखि लिएर समाजमा पुर्नस्थापनाको काममा समेत स्पष्ट सरकारी नीतिको अभावले कानुनी कारवाही प्रभावकारी नभएको कानुनविदहरू बताउँछन् ।
कतिपय जानकारहरू भने बलात्कारका घटनाहरु अकस्मात बढेको स्वीकार्दैनन् । उनीहरूको भनाइमा पहिले लुकाइने गरिने त्यस्ता घटनाहरू अहिले बाहिर आउने गरेकोले सङ्ख्या बढेको जस्तो देखिएको हो ।
समाजमा दिनप्रतिदिन बलात्कारका घटना बढिरहेका छन् । बलात्कारीलाई यो वा त्यो सजाय दिनुपर्छ भन्ने आवाज त उठेको छ तर बलात्कार न्यूनीकरणका उपाय के हुन् खासै बहसमा समेत आउन सकिरहेको छैन ।
समस्याको चुरो पहिल्याइएन भने हाँगा छिमलेरमात्रै के गर्नु हो केही घटना बाहेक अपराधी पक्राउ त परेको छ तर पनि किन घटना न्यूनिकरण भइरहेको छैनत ?
कतिपय जानकारहरु हाम्रो समाजमा यौन कुण्ठा व्याप्त रहेको बताउँछन् । उनीहरुका अनुशार यौनलाई यति गोप्य बनाइएको छ कि प्रायःको दिमागमा कौतूहलताको भुंग्रो छ ।
यौनका कुरा गरेमात्रै पनि ‘लाज पचेको’ ‘नैतिकहीन’ ‘पतन’ आदि विभिन्न आक्षेप लग्ने गर्दछन् । यही आक्षेपका कारण मानिसले मनमा अतीशय कुण्ठा पालेको बताइन्छ । । यौन कुन्ठाले निकाश नपाउँदा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा आदि विभिन्न रूपमा विकास भइरहेको कतिपयको तर्कछ ।
उनीहरुका अनुशार यौनमा जति बन्धन खडा ग¥यो, त्यति नै यो पासो बन्दैजान्छ । अतः हामी यौनका विषयमा खुल्ला, उदार बन्नैपर्छ । यौन शिक्षा, यौन सचेतना, एउटा उपाय हुन सक्छ । वेश्यावृत्तिलाई कानुनी मान्यता दिने अर्को उपाय हुन सक्छ । आवश्यक व्यक्तिले सुरक्षित तरिकाले उपभोग गर्न दिन हामीले किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ? उनीहरुको तर्कछ ।
यौनलाई जति हाउगुजी बनायौँ, जति गुप्त राख्दै गयौँ, त्यति नै यसले अपराधको रूप धारणा गर्दै जाने खतरा टार्ने उपाय भनेकै वेश्यावृत्तिलाई कानुनी मान्यता दिने अर्को उपाय हुने उनीहरुको तर्क छ । लेख चक्रपथबाट साभार |
त्यसोत कतिपय अधिकारकर्मीहरु बलात्कारीलाई फाँसीको सजायको माग गरिरहेका छन् । बलात्कारीलाई फाँसी दिंदा एउटा बलात्कारीको त अन्त्य हुन्छ तर समस्याको जड कुरालाई बाँकि राखिरहँदा अन्य बलात्कारीहरु उब्जिरहने खतरा छ । त्यसैले कडा भन्दा कडा कानून सँग सँगै बेश्यावृद्घिलाई कानुनी मान्यता दिने बहश सुरु गर्न ढिला भइसक्यो ।
« श्रीमतीको नाममा व्रत (Previous News)
(Next News) ब्राजिलका आदिवासी–जनजातिको जर्जर कथा »